Kitty For Me: 2007
Happy New Year ရောက်တော့မယ်...သူများတွေတော့ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲမသိဘူး...ဒီမှာတော့ ရုံးလေးပိတ်လိုက်တော့ အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ ပျော်တာ...ဟီးဟီး...ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်တစ်ရက်ပြီးရင် နောက်နေ့ ရုံးပြန်တက်ရပြီ...စိတ်လေတယ်...
ရုံးဖွင့်ရက်တွေတုန်းက ရုံးပိတ်ရက်ကြရင် ဟိုဟာလုပ်စားမယ် ဒီဟာလုပ်စားမယ်နဲ့ ... တကယ်တန်းလဲ ပိတ်ရော အပျင်းထူးနေတာနဲ့ ဘာမှမလုပ်စားဖြစ်ဘူး...တစ်နေလုံးအိပ်..တစ်ညလုံး korea show တွေကြည့်...Super Junior ရဲ့ ရှိသမျှရှိူးတွေ လိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကြည့်....ပျော်စရာကြီး...ပိတ်ရက် ၄ ရက် တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကုန်သွားတယ်...
စာလဲမလုပ်ရသေးဘူး...ရုံးအလုပ်တွေလဲ အိမ်သယ်လာပြီး ကြည့်တောင်မကြည့်မိဘူး...ဟီးဟီး...ကောင်းတယ်...
၂၀၀၈ ....အသက်က တစ်နှစ်ကြီးသွားပြန်ပြီ....မာမီရာ ၃ နှစ်လောက်နောက်ကြပြီးမွေးခဲ့ရင် တော်တော်ကောင်းမှာပဲ...ဟဲဟဲ...
ဘာပဲပြောပြော Happy New Year....နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ စာတွေ အလုပ်တွေလုပ်ရမယ် (ဟီး ..နှစ်တိုင်းတော့ ဒီလိုပဲ ကြုံးဝါးနေကြပါပဲ ...)
Hyuk) Love, oh baby my girl
(Ryeo)Will you marry me? I do
Watch Marry U Performance
Download Marry U MV HERE
Posted by Me at 12:31 AM 1 comment:
Labels: Marry U, Suju, Super Junior
I've been searching this song very long time....
I'm so happy....I've got it today....
4. I’m Already There
Posted by Me at 10:55 PM3comments:
Supernova - GoodBye
The day the wind blew strong.
Your forlorn eyes told me goodbye
You said you would love only me
You said you will protect only me
Are we really going to be no one to eachother now?
You’re being so cruel leaving me like this. Please don’t leave
Look back at me at least once on your way
Love has broken my heart.
You’re happy now that you’ve left me.
Even the happy memories of us that made us cry has left me.
Goodbye to your shy confession of your love for me
Goodbye to our pinky promises
ah - ah - ah ah ah - ah ah ah - ah ah ah
ah ah ah - ah ah ah ah - ah ah ah ah ah
Even the happy memories of us that made me cry has left me.
If you’re not going to come back to me.
Then just don’t look back at all.
How can you leave me like this?
How can you be happy leaving me?
Why are you throwing away those nice memories of us?
Goodbye to our happy times.
Goodbye to our beautiful love
I long for the days when you made me smile.
I don’t think I can ever forget you. I’ll have to cope with it
When I long for your love, ill probably cry and miss you even more.
I don’t think I can ever forget you.
credit to : Credits: x__suki
What I am thinking at the moment?
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့လေး ပြန်ရေးမလားလို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
အခုတစ်လော အလုပ်ကလဲ အရမ်းများ။ ညဘက်ရုံးကပြန်လာရင် ကွန်ပြူတာတောင် မဖွင့်မိတော့ဘူး။ ရေချိုးထမင်းစားပြီးတာနဲ့ တန်းအိပ်တော့တာပဲ။ အခုတော့ စနေ တနင်္ဂနွေမှာ ပုံမှန်လုပ်နေကြ အလုပ်လေးတွေ ပြန်လုပ်မလားလို့လေ။
FOR OUR 7TH ANNIVERSARY OF BEING LOVE
သစ်စာရှိကြေး - li ကောင်းမြတ်+ဇမ်နူး
7 years of holding hands
7 years of hugging,
7 years of laughing,
7 years of cuddling.
7 years of kissing
7 years of touching
7 years of romancing.
7 years of your love
7 years of my love,
7 years of our love
7 years of true love.
Mg !!7year with you
Years of happiness,
Years of passion,
Years of joy,
Posted by Me at 10:19 AM7comments:
FT Island - I AM HAPPY
for our 7th anniversary love
Posted by Me at 9:30 AM2comments:
ဆရာမခင်စောတင့်ရဲ့ အချိန်လေးတော့ပေးလိုက်ပါ စာအုပ်ထဲကပဲ လူငယ်နှင့် ရည်မှန်းချက် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကိုလဲ သဘောကျမိတယ်။ အဲဒီထဲက အတုယူမှတ်သားထားသင့်တာလေးတွေက .....
လူငယ်တွေကို စကားလေး သုံးခွန်း လက်ဆောင်ပေးပါရစေ။
၁။Hard Work - ၀ီရိယထည့်ပြီး လုပ်ရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်။
၂။Risk Taking -စွန့်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ရဲဖို့။
၃။Innovation -ဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့ သို့မဟုတ် စနစ်သစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့။
နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ထက်သန်မှုကိုရဖို့ တွန်းအားလိုအပ်နေရင် အောက်ပါစကားတွေကို ပြောကြည့်စေလိုပါတယ်။
-ငါ့အတွက် မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
-ငါဟာ ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ အင်အားရှိတယ်။
-ဒီနေ့အဖို့ အလုပ်အားလုံးကို လုပ်ဖို့ ငါ့မှာ အရည်အသွေးရှိတယ်။
-ငါဟာ အလုပ်ထဲမှာ အောင်မြင်နေတယ်။ နောက်ကိုလည်း ဆက်ပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်မယ်။
-ဒီနေ့စာ ဒီနေ့ပဲ မနက်ဖြန်မဟုတ်ပါ။
"ကောင်းကင်ကိုပျံဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့သူဟာ လေးဘက်သွားခိုင်းတာကို ဘယ်လိုမှ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး"
ဒီတစ်ပတ် ရုံးပိတ်ရက် ၃ ရက်မှာ ဂျူး ရဲ့ ကြာတော့သည်လည်းမောင့်စကားနဲ့ ချစ်သူလား စကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ် ကို ပြန်ဖတ်မိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းဆီက ဆရာမခင်စောတင့်ရဲ့ အချိန်လေးတော့ ပေးလိုက်ပါ စာအုပ်လေးဖတ်မိတယ်။ အဲဒီထဲက အချိန်ယူလုပ်ဖို့ အကြောင်းအရာ ၁၂ မျိုးကို သဘောကျလို့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါရစေ။
(၁) အလုပ်လုပ်ဖို့ အချိန်ယူပါ။ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။
(၂)တွေးဖို့ အချိန်ယူပါ။ စွမ်းအားဖြည့်ဖို့ ဇစ်မြစ်ဖြစ်တယ်။
(၃)ကစားဖို့ အချိန်ယူပါ။ လူငယ်ဘ၀ရဲ့ သော့ချက်ဖြစ်တယ်။
(၄)စာဖတ်ဖို့ အချိန်ယူပါ။ အသိပညာအတွက် အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။
(၅)ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရန် အချိန်ယူပါ။ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းရဲ့ လမ်းမကြီးဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ သင့်အမြင်ကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို ဆေးကြောပစ်တာလည်း ဖြစ်တယ်။
(၆)မိတ်ဆွေတွေကို ကူညီဖို့နဲ့ သူတို့နဲ့ ချစ်ကြည်ပျော်မွေ့ဖို့ အချိန်ယူပါ။ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် လမ်းအစဖြစ်တယ်။
(၇)ချစ်ခြင်းမေတာပေးဝေဖို့ကို အချိန်ယူပါ။ ဘ၀ရဲ့ မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်။
(၈)စိတ်ကူးယဉ် အိမ်မက်မက်ဖို့ အချိန်ယူပါ။ စိတ်ကို ကြယ်တွေဆီအထိရောက်အောင် ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။
(၉)ရယ်မောဖို့ အချိန်ယူပါ။ ဘ၀ရဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့ပါးစေမယ့် တေးသီဆိုမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
(၁၀)အလှအပကို ခံစားဖို့ အချိန်ယူပါ။ သဘာဝတရားထဲမှာ နေရာအနှံ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၁၁)ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ယူပါ။ ဘ၀အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ကြွယ်ဝမှုရဲ့ ရတနာသိုက်ဖြစ်တယ်။
(၁၂)စီမံကိန်းချဖို့ အချိန်ယူပါ။ အထက်ပါ အချက် (၁၁) ချက်ကို အချိန်ယူပြုလုပ်ရန် အချိန်ကို ခွဲဝေပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်။
D2B - Ja goh hok gun bai teung nai
D2B ရဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို စသိတုန်းက ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ MTV Asian Award မှာ သူတို့ရဲ့ TypeII Album က သီချင်းဆုရလို့ လာယူကြတာ။ ထိုင်းသီချင်းတွေကို အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ပြန်နားထောင်ဖြစ်တာပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ထုံချိုင်းသီချင်းတွေကိုပဲ ကြားဖူးတာပေါ့။
သူတို့အဖွဲ့မှာ အရင်တုန်းက Dan, Beam, Big ဆိုပြီး ၃ ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Big က ကားအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့ comma ဖြစ်သွားတယ်။ so sad..... ။ Big သီချင်းမဆိုနိုင်တော့ Dan နဲ့ Beam ၂ ယောက်ထဲ Dean And Beam ဆိုပြီး ဆက်ဆိုကြတယ်။ Big ကတော့ အိပ်ရာထဲလဲနေတာ ဘယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီလဲ မသိတော့ဘူး။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက သူတို့အဖွဲ့ကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဘန်ကောက်လူကြုံနဲ့ သီချင်းခွေတွေ VCD တွေမှာလိုက်ရတာ။ တော်တော်လဲ ပေးရတယ်။ အခု ဘန်ကောက်မှာလဲနေရော ဘာထိုင်း အခွေမှကို မ၀ယ်ဖြစ်တော့ဘူး။ သူတို့အဖွဲ့ကိုလဲ Big မပါတော့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားမိတော့ဘူး။
အသစ်ထွက်တဲ့ Album တွေကိုလဲ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး။ သီချင်းဟောင်းလေးတွေပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် TypeII အခွေထဲက သီချင်းလေးတွေကိုပဲ နားထောင်မိတယ်။ အဲဒီအခွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ၂ ပုဒ်က Big တစ်ယောက်ထဲ ဆိုထားတဲ့ Heung နဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်လုံးဆိုထား တဲ့ja goh hok gun bai teung nai အဲဒီ ၂ ပုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ သူတို့ရဲ့ lyrics နဲ့ meaing ကို ethaimusic မှာ ကြည့်လို့ရတယ်လေ။
Ja goh hok gun bai teung nai lyrics
Posted by Me at 3:49 AM 1 comment:
ဒီနေ့ ရုံးမှာ အားနေတာနဲ့ Blog Template လေးကို change လိုက်တယ်။ ခရမ်းရောင်လေးသုံးလိုက်တယ်။ ဘာအရောင်ရွေးရမလဲလို့ တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရသေးတယ်။ နောက်တော့ ခရမ်းရောင်လေးကို ဘယ်လိုဓါတ်ကျသွားလဲ မသိပါဘူး။ တစ်ချို့လေးမယ်ထင်တဲ့ sidebar ကဟာတွေ ဖြုတ်လိုက်တယ်။ နောက် ပုံတွေတင်ရင်လဲ size တွေလျှော့ဦးမှပဲ။ သူငယ်ချင်းက နင့်ဘလော့ဖွင့်ရတာ တော်တော်ကြာတယ်လို့ပြောတယ်။
Posted by Me at 2:50 AM3comments:
+++++စိတ်မရှည်ဘူး+++++ ဘယ်လောက်စိတ်မရှည်လဲဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် စိတ်မရှည်နိုင်ဘူး။ ဘတ်စ်ကားစောင့်ရတာလဲ စိတ်မရှည်ဘူး။ ထမင်းဆိုင်မှာ အကြာကြီးစောင့်နေရရင်လဲ စိတ်မရှည်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားပြီး စောင့်နေရရင်လဲ စိတ်မရှည်ဘူး။ ထိုင်းတွေ နှေးနှေးကွေးကွေးနဲ့ ဆိုရင်လဲ စိတ်မရှည်ဘူး။
+++++စိတ်တိုတယ်+++++ ဘတ်စ်ကားမလာရင် စိတ်တိုလာရော။ ကားသမားက ဖြေးဖြေးလေးမောင်းရင် စိတ်တိုလာရော။ မနက်အလုပ်သွားကာနီး မိုးရွာရင်လဲ စိတ်တိုလာရော။ ကားက မှတ်တိုင်မှာ မရပ်ပဲ ကျော်ပြီးရပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ဖြစ်ဖြစ် ရပ်လိုက်ရင်လဲ စိတ်တိုလာရော။
+++++စိတ်ပျက်တယ်+++++ နေ့တိုင်း notebook ကြီးနဲ့သွားရတာ စိတ်ပျက်တယ်။ ကားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံမရတဲ့နေ့ဆိုရင် လေးကလဲ လေး..ရာသီဥတုကလဲ ပူနဲ့ စိတ်ပျက်တယ်။ အဝေးကြီးသွားရတဲ့ ရုံးကိုလဲ စိတ်ပျက်တယ်။ လမ်းတွေ ကားတွေ ကြပ်လွန်းတဲ့ Lat Phrao နဲ့ Ramkhamhaeng ကိုလဲ စိတ်ပျက်တယ်။
+++++တစ်ခုမှ မကောင်းဘူးနော်။ စိတ်မရှည်..စိတ်တို...စိတ်ပျက်။ ကြာရင် အသက်တိုလိမ့်မယ်။+++++
Posted by Me at 7:18 AM 1 comment:
Chip and Dale !! Do you love them?
ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ ရှဉ့် ၂ ကောင် ကာတွန်းကားပါ။ သွားကလေးတွေက ရှည်ရှည်...တစ်ကောင်က စကားခပ်များများ...တစ်ကောင်က နဲနဲအူတူတူနဲ့လေ။ တစ်ခုခု ဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရရင် တစ်ကောင်က တစ်ကောင်ကို အမြဲသွားပြန်ပြီးဆွဲခေါ်ရတယ်။ ဘဲ ရဲ့ခြံထဲမှာ ဖရဲသီးသွားခိုးစားကြတာလဲ သူတို့ ၂ ကောင်ပဲလေ..နော်။
ဟယ်...လိုချင်လိုက်တာ... Shin Hye Sung KeyChain ဆိုပဲ....ချစ်စရာလေး... ဒါပေမယ့် Hye Sung တော့ တော်တော်ရုပ်ဆိုးသွားတယ်...
FT Island ရဲ့ Music Video တွေကိုပဲ အခုတစ်လော နေ့တိုင်းပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ လွန်တယ်နော်။ ဟဲဟဲ။ အားလုံးကြည့်လို့ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းမှာက Youtube ကြည့်လို့မရတော့ google video မှာ ပဲတင်ထားလိုက်တယ်။ သူလဲ မဆိုးပါဘူး။
FT Island - Let's Go